Waalid xoog looga kaxeeystay lix caruur - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waalid lagala wareegay caruurteedi. Sahra maaha magaca rasmiga ee gabadhan. sawir: Mona Ismail Jama/SR
Waalid xoog looga kaxeeystay lix caruur
La daabacay fredag 15 december 2017 kl 15.00
Sannad walba ayey heeyada adeegga bulshadda, socialtjänsten, kumaankum caruur kala wareegaan waalidkood. 2016 ayey heeyadan la wareegtay 8000 oo caruur. Mid ka mid ah waalidiinta ay tani ku dhacday ayaa ah gabadh aan ku magaacaabay Sahra oo ku nool magaalada Trollhättan.
Bishii abriil sannadkan ayey degmadu la wareegtay lix ka mid ah todobadeeda caruur. Waxeey sheegtay in aaney fahansaneeyn sababta caruurteeda looga qaatay.
-Waxaan dhex taagnahay gurigii oo cidlo ah, sariirahii caruurta oo madhan. Dhibaatadii adduunka igu weeyneeyd ayaa i saaraan, waxaan dareemaya murugo badan, ayey sheegtay Sahra.
Sannadkii ugu dambeeyay ayaa dhowr qoys oo soomaali ah sidan oo kale caruuraha lagala wareegay. Tan ayaa welwel iyo baqdin ku abuurtay dadka magaaladan ku nool oo cabsi ka qaba in caruuraha laga qaato. Sidaas daraadeed ayey boqolaal soomaali iskugu yimaadeen suuqa magaaladan bishii juun sannadkan sida ay uga mudaharaadaan arrinkan, caruuteena noo soo celiya ayey ku dhawaaqayaan.
Sababta caruurtan loo qaatay maxeey tahay? Su´aasha kale ay waalidiintan ay is weeydinayaan ayaa ah maxaa caruurta soomaaliyeed loo booba?
Malin Hedelin ayaa madax ka ah heeyada adeegga bulshadda magaalada Trollhättan. Waxeey sheegtay in go´aan kasta oo ay qaataan ku tiirsanyahay qeeynuunka dalkan u yaala. Kaas ayey ku qorantahay in caruurta guriga lagu dilo amba si kale loo bahdilo u baahanyihiin in si degdeg ah loola wareego. Go´aankaas na waxaa iska leh maxkamada racfaanka maamulka ee förvaltningsrätten loo yaqaano. Hasayeeshe ayuu codsigu in caruurtu u baahan yihiin in la badbaadiyo marka hore ka imanaya heeyada adeegga bulshada ee socialtjänsten.
-Kama welwelsani in aan go´aanu khalad qaadano. Shaqaalaheenu waa dad wax soo bartay oo sharciga dalkan dusha ka haya. Ilama ahaa in go´aanada aanu gaadhno ka dhasheen isfahan l´aan, sida ay qoysaskani u jeedaan, ayey sheegtay Malin Hedelin, madaxda heeyada adeegga bulshada Trollhättan.
Ururka Midnimo ayaa dhowr bilood ka hor lagu asaasay magaalada Trollhättan. Mid ka mid ah sababaha loo bilaabahay ayaa aheeyd kalsooni darrada soomaalida trollhättan ay u qabeen degmada magaaladan oo sida ay iyagu u sheegeen iyaga oo aan waanin waalidiinta caruurta dugsiyada ku boobay. Yasin Musa ayaa ah guddoomiyaha ururkan.
-Ururkan waxaa loo asaasay baahidii qaar ka mid ah qoysaska magaaladan ay dareemeen markii carurahooda laga qaatay. Warqadaha ayaan u akhrina, sido kale waxaan ka wargelina sharciyada dalkan ka jira, ayuu sheegay Yasin Musa.
Soomaalida Trollhättan ku nool ayaa muujiyay fikir ah in shaqaalaha heeyada adeegga bulshadda magaaladan aqoon u lahin dhaqamada kala duwan islamarkaas na waalidiinta ka wargelin xuquuqaha ay xaqa u leeyahiin . Yasin Musa ayaa sheegay in xaalada magaaladan keentay in ay qaar ka mid ah qoysasku qorsheenayaan in ay ka guuraan Trollhättan.
Ghita Hadding Wiberg oo ah qareenad khibraad dheer u leh kiisaska noocan oo kale ah islamarkaas na difaacday dhowr qoys oo caruurahoodi laga qaatay. Hadding Wiberg ayaa qeeybsanaysa fikirka ururka Midnimo iyo qoysaska caruuraha laga qaatay. Sababta ayaa ah, ayey sheegtay, in shaqaalaha heeyada adeegga bulshada ku liitaan laba wax. Qaabilaada qoysaskan iyo aqoonta la xidhiidha dhaqamada kala duwan, tusaale in uu qaab dhismeedka soomaalidu uu ka duwanyahay kan Iswiidhishka ah.
Hasayeeshe ma run ba in caruuraha la qaato u badan-yihiin ajaanib? Tirokoobkii ugu dambeeyay ay heeyada caafimaadka ee Socialstyrelsen arrinkan ka sameeysay 2014 ayaa sheegaya in caruuraha laga qaato waalidkood u badanyihiin ajaanib.
Dhowr bilood ayaa ka soo wareegay maalintii Sahra lagala wareegay caruurteedi. Wey ka muuqata in ay murugeeysantahay islamarkaas na ay tebeyso caruurteedii oo aan muddo dheer arag.
-Caruurteeyda waxaa la kaxeeystay aniga oo aan ogeeyn, in la ii tuso waa la diidey, ilaa hadda lama kulmin, ayey tidhi gabadhan oo aan Sahra ku magacaabnay.